Disney + waxay gaareysaa 95 milyan macaamiil adduunka ah | Androidsis
Disney + waxay gaaraysaa 95 milyan oo macaamiil adduunka ah
Kahor intaan la bilaabin Latin America, Disney ee fiidiyaha adeegga fiidiyowga Disney +, lahaa 73 milyan oo macaamiil ah, Tirada ka dib markii la gaadhay dalal badan, sidii la filayay, ay ku korortay in ka badan 20 milyan oo gaadhaysa 95 milyan oo macaamiil ah.
Markii Disney soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay baahinta fiidiyowga, waxay dejisay hadafka ah inay gaaraan inta u dhexeysa 2024 iyo 60 milyan oo macaamiil ah sannadka 90, tiradaas oo ay dhaaftay iyadoo hal sano oo keliya suuqa lagu jiro Saadaasha cusubi waxay soo jeedinaysaa taas sanadka 2024 waxay yeelan doontaa inta udhaxeysa 2030 iyo 260 milyan oo macaamiil ah.
Netflix, maanta waxay leedahay wax ka badan 200 milyan oo macaamiil ah, rukumo aad uga qaalisan kan Disney na siiso, in kastoo ay haddaba bilaabatay kootada kor u qaad. Inta badan koritaanka Disney wuxuu ku saleysan yahay rukhsad sannadeedka la bixiyo Markii la bilaabay Disney +, dallacsiinta ay isticmaaleyaal badani ka faa'iideysteen (sida kiiskeyga yahay).
In kasta oo ay run tahay in Disney + ay ku dhawaaqday dhawr bilood ka hor qorshayaasheeda inay Abuur waxyaabo cusub oo qaab taxane ah ku saleysan Star Wars iyo Marvel, Heerka abuurista silsiladan ayaa gaabis ah. Intaa waxaa dheer, buugga la heli karo (oo aan la tirin karin buuxinta), sida Apple-ku aad buu u xadidan yahay runtiina kuguma martiqaadin inaad sii wadato bixinta rukunka bil kasta.
Sidaan dhowr jeer idhi, heerka macaamiisha Disney + waxay salka ku haysay dallacsiinta bilaabista. Hadda oo la heli karo ku dhowaad meel kasta oo adduunka ah iyo in qiimaha kor u kacay, waa arrin waqti ah ka hor inta aan isticmaaleyaashu bilaabin qiimee haddii waxyaabaha ku jira ay runtii u qalmaan ama haddii la doorbido in la shaqaaleeyo bilo hal ah oo la sameeyo maratoonnada ka kooban waxyaabaha cusub ee lagu sii daayay bartaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Disney + waxay gaaraysaa 95 milyan oo macaamiil adduunka ah
Abuureyaasha Fortnite ayaa kuu oggolaan doona inaad ku ciyaarto "ilaah" adiga oo abuuraya bini'aadam dijital ah
Ka daawo TV-ga kombiyuutarka gacanta